Alaabtu waxay leedahay dhammaystir dusha sare ah, siman oo bilaash ah, laqabsi xoog leh, wax qallafsanaan ah - deegaanka 45 digrii, ma jirto cidla, miridhku, aan sun ahayn iyo dhadhan la'aan, dusha siman, xoqin, ma laha bur, adag oo waara.
Soo bandhigida badeecada dambiisha jeermiska birta ah ee aan nadiifka ahayn
1. Walaxda dambiisha jeermiska birta ah: 302, 304, 304L, 316, 316L iyo qalabka kale ee birta ah
2. Habka wax soo saarka ee dambiilaha jeermiska birta ah ee birta ah: alxanka birta ah ee birta ah, mesh alxanka korantada ee birta ah, mesh birta ah ee birta ah, mesh feedhka birta ah, alxanka argon, alxanka caabbinta, iwm.
3. Hababka daawaynta dusha sare ee dambiisha jeermiska birta ah: electrolysis, polishing, iwm.
4. Astaamaha dambiilaha jeermiska birta-la'aanta ah: aan sun ahayn, dhadhan lahayn, adag oo waara.
5. dambiisha jeermiska birta ah ee birta ah waxaa inta badan loo isticmaalaa jeermi-dilista qalabka caafimaadka, maacuunta cuntada iyo shaybaadhada kiimikada. Cabbirrada guud waxaa loo soo saaraa si waafaqsan shuruudaha macaamiisha
Astaamaha alaabta ee dambiisha jeermiska birta ah ee aan nadiifka ahayn
1. Walxaha birta ah, daawaynta dusha sare, daawaynta polishing electrolytic, waarta, dhalaalaya sida muraayadda, aan daxalaystay oo aan isbeddelin.
2. Farsamada alxanka alxanka iska caabinta booska micro iyo alxanka aan dabada ahayn ayaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in alaabtu aysan lahayn meel alxanka soo baxda, dhaawaca alxanka, burka iyo soo dhaca, waana badbaado in la isticmaalo. 3. Naqshadeynta xayndaabku waxay ku habboon tahay gelitaanka biyaha ama uumiga, nadiifinta iyo jeermiska. 4. Dambiilyo badan oo shabaq ah ayaa la isku dhejin karaa.
Baaxadda isticmaalka dambiisha jeermiska birta ah ee aan nadiifka ahayn
1. Waxay ku habboon tahay nadiifiyeyaasha caafimaadka iyo tijaabada.
2. Waxaa loo isticmaali karaa jeermi-dilista iyo jeermiska, nadiifinta ultrasonic, kaydinta, iwm gaar ahaan, qalabka qalliinka iyo qalabka ogaanshaha iyo daaweynta waxaa lagu dhejin karaa saxanka qalabka nadiifinta, jeermiska iyo jeermiska.
3. Waxaa lagu dabaqi karaa qaybaha caafimaadka iyo waaxyaha isbitaallada, sida qolka qalliinka, qolka sahayda, qolka jeermiska dila, rugta caafimaadka ilkaha, waadhka iyo xarumaha kale ee caafimaadka iyo waaxaha la xiriira nadiifinta, jeermiska iyo jeermiska.
Ujeedada dambiisha jeermiska birta ah ee aan nadiifka ahayn
jeermi-dilista birta ah iyo jeermiska nadiifinta dambiisha iyo bacda dhiiga balaasmaha ayaa loo qaabeeyey loona habeeyey cosbitaalo badan oo gudaha ah, warshadeeyayaasha qalabka caafimaadka, saldhigyada dhiiga, mashiinada cuntada iyo warshado kale. Waxaa loo isticmaalaa jeermiska jeermiska, nadiifinta ultrasonic iyo kaydinta. Qalabka qalliinka iyo qalabka lagu baaro iyo daawaynta ayaa lagu ridi karaa saxaarada si loo nadiifiyo loona nadiifiyo. Nadiifinta birta aan fiicnayn, jeermis-dilka iyo dambiisha kaydinta jeermiska ayaa loo isticmaalaa isbitaallada, qalabka caafimaadka iyo qalabka, biopharmaceuticals, shaybaarrada iyo weelasha jeermiska dila.
Hore: Birta Aan Lahayn 316 dubay silig barbecue tayo sare leh
Xiga: 304 bir ah oo bir ah oo bir ah oo bir ah oo bir ah oo bir ah oo bir ah oo bir ah oo bir ah oo bir ah oo ku taal buundada ilaaliyaha
bir ahama / galvanized oo dalool dalool...
Shayga shaandhada shaashadda birta ah ee godadaysan ee cabbirka: cabbirrada caadiga ahi waa 500x1000mm, 600x1200mm, 1000 x1000mm iyo 1200 x1200mm. Cabbir kasta oo ka mid ah xadka sare waxaa lagu habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Soo bandhigida shaandhada fiilada alxanka tuubada shaashadda qaabeysan waxaa sidoo kale loo yaqaan tubbada shaashadda qaabeysan, tuubbada shaashadda V-qaabeeya iyo tuubbada shaashadda qaabeysan. Waxay ka kooban tahay dhululubo V-qaabeeya oo ay ku wareegsan tahay usha taageerada ee si dheer loo dhigay. The...